Kooxda I.L.S oo si xarago leh ugu guulaysatay koobka Jen. Daa’uud + Sawirro | Maanta Online
Home / Social Media / Sports / Kooxda I.L.S oo si xarago leh ugu guulaysatay koobka Jen. Daa’uud + Sawirro
Posted by: admin in Sports April 5, 2015	Comments Off on Kooxda I.L.S oo si xarago leh ugu guulaysatay koobka Jen. Daa’uud + Sawirro 642 Views
Kooxaha kubada kolayga I.L.S iyo Heegan ayaa galabta ku kulmay Garoonka Wiish kulanki ugu dambeeyay koobka kubada kolayga Jen.Daa’uud, waxaana ciyaartan u soo daawasho tagay Masuuliyiin ka soctay wasaarada dhalinyarada iyo isboortiga, guddiga Olombiakda Soomaaliyeed, Madax ka soctay xiriirada ciyraatoy hore iyo taageerayaasha labada koox oo si wayn u soo camiray garoonka.
Kulankan oo dhanka kale lagu lagu maamuusayay Alle ha unaxariistee Masuuliyiintii isboorti oo maanta oo kale -ta April 2012 ku geeriyooday qaraxii ka dhacay Tiyaatarka, Guddoomiyihii Gos Aadan Xaaji yabaro Wiish, iyo guddoomiyihii XSKC Saciid Maxamed Nuur Mugaambe dhamaan dadwaynihii ku sugnaa garoonka ayaa u istaagay Faataxana u aqriyay dhamaan bahdii sibrotiga ee geeriyootay.
Ciyaarta labada koox oo si gaar ah xiiso u lahayd maadaama Heegan ay ahayd kooxda Difaacanaysay halka I.L.S oo ahayd kooxdii koobkan laga qaday 11-oktoobar 2013, ayay labada koox so abndhigeen ciyaar ay ka maqsuudeen dhamaan ddawaynihii u soo daawashotagay, waxaana Kooxda I.L.S oo inta badan ciyaarta ku gacan sareysay ayaa Heegan kaga adkaatay 59-45 .
Gebagabadii waxaa halkaas ka hadlay Guddoomiyaha XSKC Cabdullahi Nuur Maxamed Cadaani waxuuna mahad celin u soo jeediyay dhamaan kooxihii ka qayb galay tartanka , gaar ahaan kooxda I.L.S oo koobka hanatay, waxuuna intaa ku daray in xiriirka uu 20-ka bishan qaban doono xaflad gaar ah oo lagu bixin doono abaalmarin qaybaha kala gedisan ee tartanka, balse I.L.S ay guddoomi doonto koobka lagu maamuusayay Marxuumiintii geeritootay.
Guddoomiyaha Gos, Cabdullaahi Axmed Tarabi ayaa isna sheegay in labada koox ay soo bandhigeen ciyaar wanaagsan, waxuuna u soo jeediyay mahad celin , Guddoomiye Tarabi ayaa dhanka kale tilmamay in Maanta ay ku beegnayd Maalin madow oo soo martay isboortiga soomaliyeed waxuna alle uga baryay dhamaan masuuliyiintii geeriyooday in janadi alle ka waraabiyo.
Wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga Maxamed Cabdullahi Xasan Nuux, ayaa oo soo xeray tartanka ayaa sheegay in tartanka uu si wanaagsan ku soo gebageboobay wasaaraduna ay farxad u tahay in ay kasoo qayb gasho ciyaartan quruxda badan, waxuuna u hambalyeeyay labada koox oo soo bandhigay ciyaar asluub leh,wasiirka ayaa kooxda I.L.S guddoonsiiyay Koobka Wiish 2015, iyadoo xaflad ku guddoomi doonta. Koobka Jen. Daa’uud oo soo bilowday 29 Janaayo 2015 waxaa ka qayb galay 10 koox koox, waxaana ku guulaystay kooxda I.L.S.
Dhanka kale waxaa galabta lasoo gebagabeeyay tartana Three Point-ga oo ay ku tartameen Cabdifitaax Maxamed Buukaale iyo Maxamed ABuukar Baroow Talyaani, oo buukalae 9-8 kaga adkaaday Talyaani.
Previous: Al-Shabab’s Deadly Resilience
Next: Madaxweynaha oo culumada ku boorriyay in ay faafiyaan fahamka saliimka ah ee Islaamka si shacabka loo badbaadiyo.